I-oasis yabucala enechibi, kufutshane ne-JCU kunye nesibhedlele - I-Airbnb
I-oasis yabucala enechibi, kufutshane ne-JCU kunye nesibhedlele
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguMichael
Sinikezela ngeyunithi yokuzimela edityaniswe nendlu yethu.
Ibhedi enye egcinwe phantsi kwebhedi yokumkanikazi ingasetyenziswa kwindawo yokuhlala.
Yakhelwe kwisaphulelo seentsuku ezi-7+.
Ukuphuma nje kuhola wendlela kufutshane nesibhedlele kunye neYunivesiti, iindawo zokutyela kunye neecafe, iibhasi, uMlambo iRoss kunye neRiverway Park kunye namachibi, iZiko lokuthenga iWillows, iicinema, ithegi yelaser, iziko lezemidlalo langaphakathi, i-roller skating. Ifanelekile izibini, abahambi, abafundi be-unit ekubekweni, abasebenzi basesibhedlele, izigulana zasesibhedlele okanye abafundi, abahambi beshishini, njl.
Iyunithi inegumbi lokulala elinomoya olungileyo, igumbi lokuhlambela langoku (ishawari kuphela), ikhitshi elungiselelwe kakuhle (kodwa akukho oveni igcweleyo, ine-microwave yokuhambisa). Igumbi lokutyela kunye nendawo encinci yeTV epholileyo enesidlali seDVD kunye neeDVD zokubukela. Iindawo eziphambili nazo zine-air conditioning. Iyunithi ayitshaywa (ukutshaya ngaphandle ngokungqongqo) kwaye akunasilwanyana sasekhaya.
4.49 out of 5 stars from 170 reviews
4.49 · Izimvo eziyi-170
Sikwingingqi ezolileyo, ecocekileyo kwaye sinabamelwane abalungileyo. Ukusuka apha ungahamba (okanye uqhube okufutshane) ukuya kwimiboniso bhanyabhanya, iindawo zokutyela kunye neekhefi, ukuhamba komlambo/iindlela zebhayisekile, amachibi asimahla eRiverway Lagoon, eyona ndawo inkulu yokuthenga eTownsville, nokunye. Simalunga nemizuzu engama-20 ukusuka esixekweni naselwandle, imizuzu eyi-10 ukusuka kwiMurray Sports Complex nakwibala elitsha. Kananjalo ngaphantsi kwemizuzu elishumi ukuya kwi-JCU nakwiSibhedlele iT'vill Gen.
Sihlala sikufutshane kwaye sonwabile ukuthetha neendwendwe. Idama lihlala lihlaziya. Ebusika KUQHUBEKA ONGEZIWEYO.
Ukuba asikho apha ngexesha lokuhlala kwakho, kuya kubakho umntu ohlala kwindlu ephambili onokukunceda, kodwa ndiya kuhlala ndingumnxeba wokuqala kwaye ndinokusingatha nayiphi na imibuzo okanye imiba.
Ukuba asikho apha ngexesha lokuhlala kwakho, kuya kuba…